Hụ ọdụ ụgbọ mmiri mepere emepe na NMap na usoro iji chebe anyị | Site na Linux
Hụ ọdụ ụgbọ mmiri mepere emepe na NMap na usoro iji chebe onwe anyị
@Igihe | | GNU / Linux, Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ehihie ọma. Taa, m wetara gị obere ndụmọdụ, anyị ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri anyị nwere. Maka nke a, anyị ga-eji NMap wee gaa n'ihu ịwụnye ya.
mgbe ahụ na-ahụ na-emeghe ọdụ ụgbọ mmiri gị pc. (Na mpaghara)
Ndị a bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị mepere emepe na mpaghara, ya bụ, ha anaghị aga ịntanetị.M na nke m, 22 dị maka ssh na 25 maka smtp.
Iji hụ ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe na pc m mana na ịntanetị m na-eme otu ihe ahụ nmap mana adreesị IP m
N'okwu m ọ na-egosi na onye nwe ụlọ ahụ na-agba mana ọ hụghị ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla mepere emepe (ọ na-enyocha naanị 1000). Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ezie na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ mepere na pc m, Router na-enyocha ya.
Ma ọ bụrụ na m na-emeghe nwoke na ọdụ ụgbọ mmiri na rawụta ...
Eziokwu ahụ na ha nwere ike ịhụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na pc m na-eweta ihe egwu na igwe m. Yabụ aga m echekwa ssh server m ntakịrị. Maka nke a, aga m agbanwe ọdụ ụgbọ mmiri (22) maka ọ bụla ọzọ ...
M na-aga dị ka mgbọrọgwụ na faịlụ ahụ / wdg / ssh_config:
ka anyi jee ebe okwuru # port 22 .. anyị na-ehichapụ # ma gbanwee ọdụ ụgbọ mmiri maka nke anyị chọrọ ..
anyị na-achọ CTRL-W. Anyị na-echekwa ya na CTRL-O ma mechie CTRL-C ma ọ bụ CTRL-X
N'okwu m, m ga-eji 2222
Anyị na-eme otu ihe ahụ na-achọ okwu ahụ "ọdụ ụgbọ mmiri" na faịlụ ahụ / wdg / ssh / sshd_config na-agbanwe ya n’otu ọdụ ụgbọ mmiri anyị ga-eji. Ugbu a, anyị dezie / wdg / ọrụ
Anyị na-achọ ssh ma anyị na-agbanwe ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ahụ maka nke anyị gbanwere na mbụ.
Ugbu a, anyị tọgharịa ọrụ ahụ.
Anyị na-emekwa nmap ọzọ.
Ka i si hụ. Ọ dịghị ihe gbasara ọdụ ụgbọ mmiri anyị na / ma ọ bụ ọrụ ssh na-apụta.
Mana ssh na aru oru?
Ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ na ị ga-esi na kọmputa ọzọ banye, ị ga-egosi ọdụ ụgbọ mmiri ị na-eji.
ssh -p 2222 IP (Ọmụmaatụ)
Eleghị anya mgbe ị na-eji ọdụ ụgbọ mmiri 2222, nmap na-apụta na ihe nwere Ethernet-PC. Naanị chọọ ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ karịrị 1000 nke anaghị eji ya
Iji hụ ndepụta ọdụ ụgbọ mmiri na ọrụ ndị na-agba ọsọ, ị nwere ike ịga ebe a
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nmap http://nmap.org/
Yabụ ị nwere ike ịgbanwe ọdụ ụgbọ mmiri nke ọrụ ọ bụla ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Hụ ọdụ ụgbọ mmiri mepere emepe na NMap na usoro iji chebe onwe anyị
Daalụ maka n'ọnụ, na-akpali.
Na Spanish? ha ha ha ha ha ha
Nke a bụ sayensị, m gbalịrị ya na ọ nwekwaghị njikọ ịntanetị, haha, enyi m nyeere m aka idozi ya mgbe m gụsịrị isiokwu ahụ n'apata ụkwụ ya, ọ masịrị ya nke ukwuu ma ọ na-etinye ubuntu na laptọọpụ ya, mgbe tupu ọ gwa m na ọ bụghị maka ya.
haha amaghim ihe ikwaghari mehie .. Ma emere m ya ka o doo anya. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ, enwere m ike ịme vidiyo maka gị. 🙂
Naaaaah, a gọrọla m maka netwọkụ na Bekee, Achọrọ m ịmụ ihe ogologo oge ma achọtabeghị m onye nkuzi nwere ndidi maka m, chee.
Kuziere nwoke gbara iri-ano dika o gbara afo iri, hahahaha
haha Ọ bụ ihe ọ bụla .. Site na hangout ma ọ bụ ihe .. O doro anya na ị ghọtara m.
Nabata na hangout ahụ !!
Onye nwe obodo, onyinye dị oke mma.
Anwa anwa ịmalite ihe ịma aka a iji hụ ma ọdụ ụgbọ mmiri 2222 oO apụtaghị
Gbaa: sudo nmap -v -sS -A -p 1-65535 localhost
PS: i scanomi ahụ ga - adị nwayọ ... m gbakwunye “-v” nhọrọ ka ike gwụ gị ike ikiri ọnụ na-eme ihe ọ bụla.
O doro anya ma ọ bụrụ .. Ma m na-ekwu maka nyocha nkịtị. The nmap nwere ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ, ịmara otu esi eji ya. ọdụ ụgbọ mmiri adịghị agbanahụ ya.
Na mgbakwunye na enwere ụzọ mgbe niile .. Karịsịa na linux, ọ nweghị ihe dị mma ọ bụla .. Ọ bụ naanị obere ndụmọdụ: p
Ebumnuche m abụghị ileda usoro aghụghọ ahụ anya mana iwu mara mma m na-ahapụ maka mgbe mmadụ echetaghị ọdụ ụgbọ mmiri ahọpụtara dị ka ndabara ndabara dị mma (ọ na-esiri ike icheta ips na ọdụ ụgbọ mmiri ...). M ikpe m nwere jikọọ remotely site VNC ka PC ebe ha n'ọdụ ụgbọ mmiri abụghị ahụkarị 5900 ma ọ bụ 5901; a normal scan ga-agwa m na e nweghi ige nti port maka vnc ya mere kedu ihe bu osiso? Azịza: Jiri nmap ma manye ya ịjụ ọdụ ụgbọ mmiri niile. 😉
N'ezie, eweghị m iwe site na ya, Anyị maara na ihe niile adịchaghị mma. Enwere naanị ọkwa nchekwa. Ma enwere ihe kariri ... enwere ihe obula nke megidere nchebe. Ọ bụ ezigbo onyinye, ịnwere ike ịme obere nkuzi na nmap. Ekele.
Ihe zuru oke zuru ezu na post gara aga. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị kpachara anya mee ya, mana ọ bịara dị oke mma. 🙂
Nke a bụ naanị nchekwa maka enweghị ike, ọ dị nwute na nhọrọ -v nke nmap ọ na-egosipụta gị na ọdụ ụgbọ mmiri ị tinyere kwekọrọ na nmap. Iji gbalịa ichebe onwe gị pụọ nmap, ị ga-eji iwu iptables, nke na - enweghị ike ichebe nyocha kpamkpam. Ma hey, ọ na-arụ ọrụ megide hacking novices ...
Ndewo, ajụjụ, aghọtaghị m ihe mere nmap anaghị ewepu ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ka ọ gbanwechara, ọ na-eweta ọdụ ụgbọ mmiri iji nyochaa na ndabara?
Eeh, nmap ndabara na-enyocha ọdụ ụgbọ mmiri 1000. Ọ bụrụ na anyị maara etu esi edozi ya, nke a ezughi iji kpuchido ssh ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ site na njigide nke nmap. Ihe kacha mma ga-abụ ọdịda2ban na psad.
Kwe ka m mee ụfọdụ mmezi na ihe ị tinyere, ana m agbazi n'akụkụ:
"Ndị a bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị a na-emeghe n'obodo ha, ya bụ, ha anaghị aga ịntanetị. N'okwu m, a na-emeghe 22nd maka ssh na 25th maka smtp."
Nke a abụghị otu. Ndị ahụ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị mepere emepe na onye ọbịa ị ga-enyocha n'ime ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ nke 1024, nke bụ oke nke NMAP na-enyocha na ndabara.
"Ndị a bụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị na-emeghe n'obodo, ya bụ, ha anaghị aga ịntanetị .."
Should kwesịrị ị dokwuo anya na naanị otu ụzọ ha si "apụ" na net bụ ịbụ igwe gị na netwọkụ igwu mmiri (NAT site na nkọwa ya bụ ntụgharị oge ochie) yana ọ bụrụhaala na ọdụ ụgbọ mmiri anaghị emeghe na ngwaọrụ ahụ mee NAT (na-emekarị rawụta) na redirect (ebugharị) ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ meghere akụrụngwa gị.
N'ezie, ọ bụrụ na igwe ejikọtara ya na modem ozugbo ahụ, ọ ga-ekpughere ya na net.
Na iwu nke @taregon bipụtara, nke bụ nke ziri ezi iji nyochaa ma kpatụ ọdụ ụgbọ mmiri niile nke igwe, ịnwere ike ịgbakwunye, n'etiti nhọrọ ndị ọzọ, -sV ka nmap na-anwa ịchọpụta ọrụ ndị na-arụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla: sudo nmap -v -sS -sV -A -p 1-65535 localhost
Malite Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) na 2012-12-06 13:39 ART
Nmap nyocha akụkọ maka localhost.localdomain (127.0.0.1)
Onye ọbịa ruru (0.00021s latency).
Egosighi: 999 emechiri emechi ọdụ ụgbọ mmiri
ORTLỌ ỌR P ỌR P ỌDORT PỌT
631 / tcp mepee ipp CUPS 1.6
2222 / tcp mepee ssh OpenSSH 6.1 (protocol 2.0)
«Eziokwu ahụ na ha nwere ike ịhụ ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na pc m nwere ihe egwu dị n’igwe m. Yabụ aga m echekwa ssh server m ntakịrị. Maka nke a, aga m agbanwe ọdụ ụgbọ mmiri (22) maka ọ bụla ọzọ ...
M na-aga dika mgbọrọgwụ na faịlụ / wdg / ssh_config:
anyị na-aga ebe ọ na-ekwu # ọdụ ụgbọ mmiri 22 .. anyị na-ehichapụ # ma gbanwee ọdụ ụgbọ mmiri maka nke anyị chọrọ .. »
MBA! Otu ihe enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na nke ọzọ!
/ etc / ssh / ssh_config na-ejide naanị nhọrọ ndị ahịa ka ọdụ ụgbọ mmiri ị setịpụrụ ga-abụ onye ssh ahịa jiri na ndabara iji jikọọ na ssh sava kama ọdụ ụgbọ mmiri 22.
Naanị ịme mgbanwe nke ọdụ ụgbọ mmiri ị na-achọ site na ịgbanwe nhọrọ a kpọtụrụ aha na faịlụ / wdg / ssh / sshd_config.
N'ikpeazụ, site na iji ngwa weebụ a anyị nwere ike ịnwale nke ọdụ ụgbọ mmiri dị ma ọ bụ na-emeghe na igwe anyị, nke zoro ezo, chọpụta na ping nkuzi nwere nkwarụ na ụfọdụ ihe ndị ọzọ: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Ezigbo nyocha. ọ masịrị m daalụ 😀
Akwa nkuzi nke nmap
ndị enyi, ọ dị onye maara otu m ga - esi amata ọdụ ụgbọ mmiri nke onye ọzọ ??? si na komputa m ???
Jiri iwu: nmap XXXX
Ebe x si ip nke komputa ka inyocha
Ndewo, nke mbụ ekele maka ịkekọrịta.
Enwere m nsogbu, olile anya na ị nwere ike inyere m aka: Mgbe ị na-eme nmap na ip m site na otu igwe ọ na-agwa m na ọdụ ụgbọ mmiri 3306 mepere ma jiri netstat m hụ na ọdụ ụgbọ mmiri na-ege ntị; Agbanyeghị, mgbe ị na-eji nledo na-arụ ọrụ nyocha ọzọ, ọ naghị egosi ọdụ ụgbọ mmiri 3306.
Enweela m agbanwee adreesị ọnụọgụ na 0.0.0.0
Ana m anwa ijikọ ngwa Java na DB na sava LAMP na ngwa ahụ na-arụ ọrụ n'ihi na emeela m ajụjụ na pc ọzọ ebe m debere sava wamp maka ule na ihe niile dị mma.
Echiche ọ bụla? Amaghị m ihe ọzọ m ga-eme
Etu ị ga-esi nweta nkwalite na GNOME 3 na Ubuntu
Office 2013 ga-abụ n'efu maka ọnwa 2